चीनमा भयो चमत्कार बिहान बनाउन सुरु गरिएको हस्पिटल बेलुका निर्माण कार्य सम्पन्न
नमा महामारी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस आतंकले अहिलेसम्म १०६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भनै हजारौं उक्त रोगबाट संक्रमित छन् ।अहिलेसम्म यो भाइरसको सङ्क्रमण नेपाल, अमेरिका, जापान, थाइल्याण्ड, फ्रान्समा पनि देखिएको छ ।
कोरोना रोगबाट संक्रमित भएका बिरामीका लागि चीन सरकारले आपतकालीन छुट्टै हस्पिटल निर्माण गरेका छन् । तस्वीरमा देखिएको उक्त हस्पिटल चीनले बिहान उद्घाटन गरेर बेलुका निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका हुन। यदि हाम्रो नेपालमा यस्तो हस्पिटल निर्माण गर्न लाग्यौं भने कति समय लाग्ला ? त्यो हामी सबैले कल्पना गर्न सक्छौं !
जनताको स्वास्थका निम्ति चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ्को निर्देशनमा उक्त हस्पिटल एक दिनमा निर्माण गरिएको हो। त्यसैले चीनलाई चमत्कारी देश भनेर पनि चिनिन्छ। यो पनि पढ्नुहोस: कोरोना भाइरस : १०६ जनाकाे ज्यान गयाे, चिनियाँ नयाँ वर्षकाे सार्वजनिक बिदा ३ दिन पछाडि सारियाे
काठमाडौ। चीनको हुबेई प्रान्तबाट फैलन सुरु भएको कोरोना भाइरसको कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १०६ पुगेको छ । निकै तीव्ररुपमा फैलिरहेको भाइरसका कारण तीन हजारभन्दा बढी व्यक्ति स’ङ्क्रमित भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । भाइरसको प्रकोपलाई रोक्न चीनियाँ नयाँ वर्षको सार्वजनिक बिदा पनि तीन दिन पछाडि सारिएको छ । हुबेईको वुहान शहरमा र अन्य शहरमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोमबारसम्म हुबेई प्रान्तमा कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ५६ देखि ७६ को बीचमा रहेको छ भने चार जनाको अन्यत्रै मृ’त्यु भएको छ । चीनमा मात्रै कोरोना भाइरसको दुई हजार सात सयभन्दा बढी घटना सार्वजनिक भएका छन् । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार तीन सयभन्दा बढी गम्भी’र बिरामी छन् ।
५० लाख बढी चिकित्सा कर्मचारी हुबेई प्रान्तमा फैलिएको कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सामेल भएका छन् । कम्तीमा दुई हजार शैय्या क्षमताको नयाँ दुई वटा अस्पताल बनाइँदै छ भने कारखानाहरु मास्क र सुरक्षात्मक कपडा बनाउनका लागि जुटेका छन् ।